Xukuumadaha Muqdisho iyo Islamabad oo kala saxiixday heshiis ku kacaya $10.5 M – Kalfadhi
Xukuumadaha Muqdisho iyo Islamabad oo kala saxiixday heshiis ku kacaya $10.5 M
ISLAMABAD, NOV 29: President ICCI, Sheikh Amir Waheed presenting a sovinior to Ambassador of Somalia, Khadija Mohamed Almakhzoumi at Chamber House.=DNA PHOTO
Sida ay qortay warbaahinta dalka Pakistaan, Ra’iisul wasaaraha dalkaasi Shahid Khaqan Abbasi ayaa goobjoog ka noqday xaflad lagu saxiixay heshiis u dhaxeeya Soomaaliya iyo Pakistaan oo ku kacaya lacag dhan 10.5 Milyan oo doolar.
Waxa uu ku qotomaa heshiiskan nidaamka diiwaangelinta iyo keydinta xoggaha dadweynaha oo ay xukuumadda Islamabad ka taageeri doonto Muqdisho.
Xafladda lagu saxiixay heshiiska waxay ka dhacday xafiiska ra’iisul wasaaraha Pakistaan iyadoo ay ka soo qeyb galeen wasiirka maaliyadda dalkaasi Miftah Ismail iyo madaxa hay’adda NADRA.
Waxaa dhanka Soomaaliya ka qeybgalay shirka wasiiru dowlaha arrimaha gudaha Cabdulaahi Faarax Wehliye, safiirka Soomaaliya ee Pakistaan Khadiija Maxamed Almakhzoumi iyo saraakiil kale.
Heshiiskan waxa uu ka dhigan yahay in hay’adda diiwaangelinta qaranka Pakistaan ee NADRA ku caawin doonto Soomaaliya qalabka loo adeegsado nidaamka diiwaangelinta muwaadiniinta.
Wasiiru dowlaha arrimaha gudaha Soomaaliya mudane Cabdulaahi ayaa uga mahadceliyay Pakistaan kaalmada ku aadan horumarinta nidaaamka diiwaangelinta qaranka.
Heshiiskan ayaa la aaminsan yahay inuu wax ka badali doono nidaamka maamulka doorashooyinka mustaqbal ee dalka.
Guddiga amniga golaha shacabka oo maanta su’aalo weydiiyay wasiirka amniga
Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka hadlay xildhibaannada ku biiray golaha wasiirada